Tag: aka na ibe edokọbara
Ego ole ka outsourcing Social Media na-efu?
Tọzdee, Febụwarị 9, 2017 Tọzdee, Febụwarị 9, 2017 Douglas Karr
Izu ole na ole gara aga, anyị na-enyocha ngwaahịa na ọrụ anyị na-enye ndị ahịa anyị. Dị ka ụlọ ọrụ, anyị nwere akụnụba akụ na ụba na-arụ ọrụ na ngwa ọrụ na nka anyị nwere ike ịkekọrịta n'etiti ndị ahịa - mana uru ndị ahụ ka ga-eweta uru ọzọ dị mkpa iji kwado ọnụahịa ụlọ ọrụ. Anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na ndị ọrụ ime ụlọ nwere ike dakọtara nsonaazụ anyị rụzuru yana ego efu ndị ahịa anyị. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị
Anyị nwere ụfọdụ nkọwa nkọwa yiri nke ahụ na usoro azụmaahịa inbound, usoro azụmaahịa inbound, ịrị elu ahịa ahịa inbound yana ọbụlagodi infographic na mgbawa mgbapụta nke azụmaahịa inbound. Ọ bụ ezie na inbound marketing na-elekwasị anya na nnweta nke ndu site na mbọ ị na-agba ahịa dijitalụ, nke a bụ ihe ọmụma sitere na Pixaal, Gini bu Ahia ahia? Ọ bụ ezigbo ezigbo akwụkwọ ozi, mana ahịa dijitalụ nwere ihe ole na ole ndị ọzọ - ire ​​vidiyo, ịkpọ oku ime ihe,
Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Anyị hụrụ StumbleUpon ebe a Martech Zone. N'ezie, ọ na-abụkarị isi okwu mbu anyị. O burula uzo mbu esi nweta ahia na web! StumbleUpon na-aga site na ụfọdụ uru ndị ọzọ nke ọrụ ya ebe a na infographic a - gụnyere eziokwu ahụ na oge njikọ gị na-aga n'ihu na-ezo aka nleta dị ogologo karịa saịtị dị ka Facebook ma ọ bụ Twitter. Facebook na Twitter na-aga n'ihu iyi… njikọ na-abịa na
Tupu ọnwa a, enwere m oge dị egwu na-eme ihe ngosi na Blog Indiana 2011. Nke a bụ ihe omume na-atọ ụtọ n'ihi na ọ bụ nke kachasị na mpaghara ahụ ma enwere m ụfọdụ ịnwale ihe ọhụrụ. Ihe ngosi a bu ihe elebara anya na ihe ndi ahia na-efu site na iji ngwugwu nyocha ha iji meziwanye ahia ahia ha. Arụ ọrụ njin ọchụchọ, arụmọrụ mmekọrịta mmekọrịta, ịmata ụzọ na ịghọta omume onye ọrụ na ibe
Ihe nlere nke Google ọ dị?
Saturday, July 2, 2011 Thursday, July 7, 2011 Douglas Karr
Taa m natara akwụkwọ akụkọ sitere na Google Analytics, mbipụta mbụ nke mpịakọta mbụ a gụrụ dị ka ndị a: N’ọnwa a, anyị na-edochi akụkọ ọkọlọtọ “benchmarking” na akaụntụ Google Analytics gị na data ejiri na akwụkwọ akụkọ a. Anyị na-eji akwụkwọ akụkọ a dị ka nnwale iji gosipụta data bara uru ma ọ bụ na-atọ ụtọ nye ndị ọrụ Analytics. Data dị ebe a sitere na weebụsaịtị niile wepụtara-na-enweghị aha data nkekọrịta na Google Analytics. Naanị weebụsaịtị ahụ